भदौबाट एकिकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ संचालनमा, १ सेकेन्डमा १ हजार ओटा कारोबार गर्न सकिने - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
किन चाहियो सरकारी गेटवे ?
मुख्यरुपमा सरकारी पेमेन्ट गेटवेले पहिलो चरणमा सरकारी राजस्व संकलनका क्षेत्रमा सेवा दिने छ । जस्तै कि अहिले सर्वसाधरणले खल्ती, ईसेवा जस्ता प्राइभेट अनलाईन भुक्तानीबाट सरकारी राजस्व अथवा रकम तिर्दै आएका छन् ।
प्राइभेट भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले केहि शुल्क लिएर, विद्युतीय शुल्क, लोकसेवा शुल्कलगायतका सरकारी राजस्व तिर्न सेवा दिइरहेका छन् । तर, सरकारी पेमेन्ट गेटवेले राजस्व (जस्तै पानीको बिल, बिजुलीको बिल, सरकारी आवेदनको शुल्क र अन्य कर) तिर्नका लागि निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने बताइएको हो ।
कुन कुन क्षेत्रमा हुनेछ पेमेन्ट गेटवेको सेवा ?
सुरुमा सरकारले राजस्व संकलनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअन्तर्गत सरकार र सेवाग्राही (जीटुपी) सेवा हुनेछ ।
कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो सरकारी कर, राजस्वलगायतको रकम भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सक्ने छ । राष्ट्रबैंक र सरकारको निर्णय अनुसार सरकारी पेमेन्ट गेटवेमा थप सेवाहरु पनि थप्न सकिने बताइएको छ । जस्तैकि कुनै प्राइभेट कम्पनीहरुसँग (जीटुपी या जीटुबी) सम्झौता पनि गर्न सक्ने छ ।
त्यस्तै एटीम, प्रयोगकर्ताबाट प्रयोगकर्ता ईकमर्स, विद्युतीय चेक, कार्ड स्विच, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफरलगायतका सेवाहरु पनि सरकारी पेमेन्ट गेटवेले दिनेछ ।
के हो नेसनल पेमेन्ट गेट–वे ?
पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् ।
यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्वन्धित भुक्तानीहरु सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो ।
पेमेन्ट गेट–वे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्विच रहेका छन् । पेमेन्ट गेट–वे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरुप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता विरुद्ध नै मुद्दा दायर
काठमाडौँ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला […]
निर्मला हत्याकाण्ड : अनुसन्धान अझै अनुत्तरित,सबैको एउटै प्रश्न अनुसन्धान अब कता ?
काठमाडौं । कञ्चनपुर भीमदत्तकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ६६ दिन पुग्यो । […]
पृथ्वीराजमार्गस्थित गोरखा भुङ्लीचोक कौदीफाँटका स्थानीयवासी तुइनबाट त्रिशुली नदी पार गर्दै । हरेक दिन तुइनबाट […]
सत्ता पक्षले चुनाव चाहेन : नेता गौतम
बर्दिया, २७ माघ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सत्तामा रहेका दलले नै निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाएका […]
अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीसँग लिने भिसा शुल्क घटायो,कति तिर्नुपर्छ अब ?
काठमाडौं । अध्ययनका लागि अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थीसँग भिसा प्रोसेसिङका नाममा अमेरिकी दूतावासले लिँदै […]
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका चन्द्र ढकालले आफ्नो टिम […]